ကျောင်းတက်နေ တဲ့ သားလေး ကို ပိုက်ဆံတွေ ခိုးလာတယ် ထင်ပြီး မေးကြည့်လိုက်ရာ မှ သိလိုက်ရ တဲ့ အဖြစ်မှန် – Let Pan Daily
ကျောင်းတက်နေ တဲ့ သားလေး ကို ပိုက်ဆံတွေ ခိုးလာတယ် ထင်ပြီး မေးကြည့်လိုက်ရာ မှ သိလိုက်ရ တဲ့ အဖြစ်မှန်
Let Pan | August 26, 2020 | World News | No Comments
မိဘတွေဟာ ကလေးတွေ အပေါ်မှာ အရမ်းစိုးရိမ်ကြီးတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလို စိုးရိမ်ကြီး တတ်တာကြောင့် ကလေးငယ်တွေကို တစ်ခါတစ်ရံမှာ အထင်လွဲတတ် ပါတယ်။ ယခု တင်ဆက်ပေးမယ့် သတင်းလေးကတော့ မိမိ ကလေးငယ်ကို ကျောင်းကနေ ပိုက်ဆံ ခိုးလာတယ်လို့ ထင်ခဲ့မိတဲ့ အဖြစ်ပါပဲ။ ဒီအဖြစ်လေး ကတော့ မလေးရှား နိုင်ငံက ကလေးငယ်လေး တစ်ဦးရဲ့ အဖြစ်ပါတယ။ အဆိုပါ ဖြစ်ရပ်လေးကိုလည်း မိခင်ကိုယ်တိုင်က လူမှုကွန်ယက် အကောင့်မှာ မျှဝေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးကို မုန့်ဖိုးအဖြစ် တစ်ရက် ကို ငွေ ၂ ရင်းဂစ် ပေးပါတယ်။ နောက်တစ်နေ့မှာတော့ ကလေးငယ်က သူမကို ၄ ရင်းဂစ် ပြန်ပေးပြီး သူ့အတွက် ပိုက်ဆံ စု ခိုင်းတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အစပိုင်းမှာတော့ သူမဟာ ကလေးငယ်က ကျောင်းကနေ ပိုက်ဆံတွေ ခိုးလာတယ်လို့ ထင်ပြီး စိတ်ဆိုးပြီး ဆူခဲ့ပါတယ်။ နောက်မှ ဘယ်ကရလဲလို့ မေးတဲ့ အခါမှာ …….
သူမ ထင်သလို မဟုတ်ဘဲ ကလေးက နှံကောင်လေးတွေ ကို ဖမ်းပြီး ရောင်းချလို့ ရတဲ့ ငွေတွေဆိုတာ သိခဲ့ရပါတယ်။ဒီလို အဖြစ်မှန်ကို သိရပေမယ့် လည်း မိခင်ကတော့ စိတ်ဆိုး မပြေနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဘာ့ကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ကျောင်းမှာ စာသင်ဖို့ လွှတ်လိုက်တာကို ဒီလို စီးပွားရေးလုပ်နေတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ မိတ်ဆွေ တချို့ကတော့ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက စီးပွားရေး ပညာရှင်လေးလို့ မှတ်ချက်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ ပရိတ်သတ်ကြီးရော ကလေးကို ဘယ်လို ထင်ကြ ပါသလဲ……….? မိခင် စိတ်ဆိုးတာ ကရော မှန်တယ်လို့ ထင်ကြပါသလား ………?
ကြောငျးတကျနေ တဲ့ သားလေး ကို ပိုကျဆံတှေ ခိုးလာတယျ ထငျပွီး မေးကွညျ့လိုကျရာ မှ သိလိုကျရ တဲ့ အဖွဈမှနျ
မိဘတှဟော ကလေးတှေ အပျေါမှာ အရမျးစိုးရိမျကွီးတတျကွပါတယျ။ ဒီလို စိုးရိမျကွီး တတျတာကွောငျ့ ကလေးငယျတှကေို တဈခါတဈရံမှာ အထငျလှဲတတျ ပါတယျ။ ယခု တငျဆကျပေးမယျ့ သတငျးလေးကတော့ မိမိ ကလေးငယျကို ကြောငျးကနေ ပိုကျဆံ ခိုးလာတယျလို့ ထငျခဲ့မိတဲ့ အဖွဈပါပဲ။ ဒီအဖွဈလေး ကတော့ မလေးရှား နိုငျငံက ကလေးငယျလေး တဈဦးရဲ့ အဖွဈပါတယ။ အဆိုပါ ဖွဈရပျလေးကိုလညျး မိခငျကိုယျတိုငျက လူမှုကှနျယကျ အကောငျ့မှာ မြှဝခေဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ကလေးကို မုနျ့ဖိုးအဖွဈ တဈရကျ ကို ငှေ ၂ ရငျးဂဈ ပေးပါတယျ။ နောကျတဈနမှေ့ာတော့ ကလေးငယျက သူမကို ၄ ရငျးဂဈ ပွနျပေးပွီး သူ့အတှကျ ပိုကျဆံ စု ခိုငျးတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ အစပိုငျးမှာတော့ သူမဟာ ကလေးငယျက ကြောငျးကနေ ပိုကျဆံတှေ ခိုးလာတယျလို့ ထငျပွီး စိတျဆိုးပွီး ဆူခဲ့ပါတယျ။ နောကျမှ ဘယျကရလဲလို့ မေးတဲ့ အခါမှာ …….
သူမ ထငျသလို မဟုတျဘဲ ကလေးက နှံကောငျလေးတှေ ကို ဖမျးပွီး ရောငျးခလြို့ ရတဲ့ ငှတှေဆေိုတာ သိခဲ့ရပါတယျ။ဒီလို အဖွဈမှနျကို သိရပမေယျ့ လညျး မိခငျကတော့ စိတျဆိုး မပွနေိုငျခဲ့ပါဘူး။ ဘာ့ကွောငျ့လဲ ဆိုတော့ ကြောငျးမှာ စာသငျဖို့ လှတျလိုကျတာကို ဒီလို စီးပှားရေးလုပျနတောကွောငျ့ပဲဖွဈပါတယျ။သူမရဲ့ မိတျဆှေ တခြို့ကတော့ ငယျငယျလေးကတညျးက စီးပှားရေး ပညာရှငျလေးလို့ မှတျခကျြပေးခဲ့ကွပါတယျ။ ပရိတျသတျကွီးရော ကလေးကို ဘယျလို ထငျကွ ပါသလဲ……….? မိခငျ စိတျဆိုးတာ ကရော မှနျတယျလို့ ထငျကွပါသလား ………?
ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ မှာ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ရောဂါပိုး စစ်ဆေး ပေးမည့် စက်ရုပ်ကို တီထွင်